MEDOGONKA NAFTAADA U SAMEE: SAMEYNTA GURIGA - BEEKEEPING
Si aad u soo saaro malab, waxaad u baahan tahay qalab gaar ah - soo saaraha malab.
Qiimaha qalabka noocan oo kale ah maaha mid hooseeya, sidaa daraadeed qof waliba ma iibsan karo.
Maqaalkani wuxuu ka hadli doonaa sida loo sameeyo wax soo saaraha malab leh gacmahaaga.
Honey waxaa lagu baddalay ficilka xoogga saadaalinta.
Tani waxay dhacdaa sida soo socota:
macmacaan ayaa lagu daabacaa mindi gaar ah;
markaa waxaa la geliyaa qalabka wax lagu duubo ee hareeraysan muddada geedi socodka;
rotor rotates iyo malab waxaa lagu tuuraa dusha sare ee maaddada dhirta malab;
kadibna waxay u socotaa hoosta iyo godka si loo miiro.
Ma taqaanaa? Honey waxba ma dhicin, xitaa haddii loo kaydiyo qarniyo.
Fursadaha wax soo saarka
Soo saaraha malab-samaynta guriga waxaa la samayn karaa ama aan lahayn wadada korontada.
Korontada ayaa loo shaqeeyaa
Qaabkan qalabka ayaa ka shaqeeya shabakada korantada. Dhibaatada korontada ku shaqeysata waa mid aad u adag, laakiin waa mid dhab ah. Tani waxay u baahan tahay gawaarida, xireyaasha iyo dhaliyaha G-21 iyo G-108. Dalool ayaa lagu sameeyaa darawalka, isaga oo tixgelinaya dhammaan cabbirada.
Waxaad xiiseyn doontaa inaad wax dheeraad ah ka barato noocyada malabaha, sida lime, bocorka, baqsaaqda, acacia, feeraha, roodhida, sheyga.
Koofiyada shimbiraha ayaa aan la saarin oo ku dheggan saxanka qalabka. Gawaarida waxaa lagu dhejiyaa koronto-dhaliyaha, taas oo ah door muhiim ah. Isticmaal woxoogaa, ku dheji koronto-dhaliyaha oo ku xir xawaaraha 12 watts. Qodob yar ayaa loo sameeyaa dusha qaybta gadaashiisa iyadoo la adeegsanayo foormo khafiif ah: waa in la helaa qaab muuqaal ah. Kadibna ku dheji guga iyo suunka.
Waa muhiim! Guga waa in la fidiyaa.
Haddii aanad awoodin in aad sameysid fiilo koronto u gaar ah, waxaad ka iibsan kartaa.
Haddii aan lahayn fiilo koronto ah
Bam mashiinka malabku wuxuu u baahan yahay dadaal iyo waqti badan marka loo eego koronto. Laakiin haddii qadarka badeecaddu yar yahay, ka dibna wax soo saaraha malabku ma adkaan doono in la soo saaro.
Ma taqaanaa? Erayga "malab" wuxuu ka yimid Cibraaniga oo macnihiisu waxa weeye "sixir."
Sida loo sameeyo wax soo saaraha malab leh gacmahaaga
Inta badan waxay sameeyaan wax soo saaraha malab iyaga oo gacmahooda ka soo mashiinka duugoobay. Mashiinka wax lagu nadiifiyo ee moodooyinka noocan oo kale ah waxaa laga sameeyey birta aan saliida lahayn. Maqaalkani ma kicin, ma oxidise oo si fiican loo dhaqo, malabna waa la helaa iyada oo aan dhadhan ahayn.
Wixii soo saarida qalabka noocan oo kale ah ayaa u baahan doona:
mashiinka mashiinka mashiinka;
iska ilaali soo saaraha malab;
Tafaasiisha nidaamka faahfaahsan
Mid ka mid ah taangiyada mashiinka dharka lagu dhaqo ayaa hoos u jaray, kan kalena midna waxba kama beddelin. Baashka la jarayo hoos ayaa loo geliyaa dhinaca kale. Marka xigta, saddex ul oo biro ah ayaa loo xiiraa siinta.
Baro sida loo sameeyo rugta shinnida ee gacmahaaga.
Dhammaan dhinacyada kale waxay ku xirtaan baalalka gudaha taangiga hoose ee saddex dhinac ah, oo u dhow hooseeya. Waxaan qaadannaa shabakada hoostiisa ka dibna qaboojiyaha dhirta labajibbaaran laga soo qaado qaboojiyaha iyo gali tuubada. Waxaan arkay tubbada iyo tuujinta hoosta. Waxaan dharbaaxeynnaa dusha sare kuna dheji labada dhinac ee taangiyada leh nalka. Waxaan ku dhejineynaa tuubada sare ee tuubada, dhinaca dhinaca kale waxaan leenahay gacanta. Waxaan ku xirnaa gawaarida iyo qabashada suunka. Laga soo bilaabo hoose ee qalabkeena, waxaa lagama maarmaan ah in la rakibo tuubo taas oo malabku socon doono.
Waa muhiim! Si aad u tijaabiso qalabka cusub waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u samayso, abuurista masaafo si aad u ilaaliso dadka kale iyo naftaada.
Qalabkani wuxuu ku caawin doonaa si dhakhso ah oo wax ku ool ah u malabinta malab, halka aysan u baahnayn dadaal badan.